भ्रष्टाचारले नेपाल, नेपालीको मर्यादा खस्केको छ | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
भ्रष्टाचारले नेपाल, नेपालीको मर्यादा खस्केको छ
April 13, 2019 Dishanirdesh Kanchan0Comments
हामीलाई आज मेरो स्वतन्त्र स्वाधिन, आत्म निर्भर राष्ट्र भन्न लाज लगाी रहेको छ । हाम्रा प्रधान न्यायाधीश रत्न बहादुर विष्ट जसले राजा महेन्द्रलाई समेत जरिवाना गरेका थिए त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र राजा महेन्द्रलाई सम्झन मन लागि हाल्छ । जसले जे भने पनि सम्झनै पर्ने आवस्थाको दायित्व नेपाली जनतामा बढेर आएको छ । त्यस्ता शासक र न्यायकर्ताले मात्र देशका जनताले चित्त बुझाई सक्दा रहेछन् । जव आफूमाथि ऐन नियमले कारवाही गर्छ तव जनता भन्दछन् न्यायले राजालाई त जरिवाना गर्यो भने हामीलाई किन नुहनु ? आज पुरै देश राजनीतिक पार्टीहरुको बाधा मजदूर जस्तो भएको छ । राजनीतिक पार्टीले जे भन्यो त्यही हुने त्यही गर्ने, चैत २९ गते २०७५ को कान्तिपुर दैनिकले पनि प्रकाशमा ल्याएको छ । शहरी विकास विभाग बवरमहलको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ २२ वर्ष अघि उक्त १२ रोपनी १२ आना २ पैसाको जग्गा न्यायालयबाट नेपाली कांग्रेसका नेता भरत शम्शेरको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश दिएको दिलाएको थियो भनिन्छ। उक्त जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम अधिग्रहण गरिएको थियो तर त्यो जग्गा रिसले जफत गरेका हुन भन्ने अफवाह फैलाई त्यस्ता जग्गाहरुलाई भ्रष्ट तरिकाले फिर्ता लिने दिने काम गरेका छन् । त्यस्तै आज बालुवाटारको जग्गा पनि विष्णु पौडेलका छोराको नाममा २०६१ सालमा गैसकेको रहेछ ।
आज खोजी भएको हो वा बालुवाटार र बबरमहलको जग्गा हामीले दखल गरि सक्यौ भन्ने बहादुरी देखाएका हुन । जो राज्यको प्रमुख स्थानमा बसका पदाधिकारीहरुले जनताको सम्पत्ती आफ्नो नाममा राख्ने खेल भन्दा ठूलो खतरनाक अरु के हुन्छ ? भ्रष्टाचारकै अभियोगमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको समयमा प्रहरी प्रमुख भरत गुरुङ, डिपी लामाको दश करोडको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएपछि राजनीतिक प्रतिसोधले राजाको समयमा जफत गरेको हो फिर्ता दिने र सांसदको उम्मेदवार बनाउने योजना बनाएर भ्रष्टाचारी डिपी लामा, भरत गुरुङको सम्पत्ति फिर्ता दियो भने बबरमहलको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत दिई सकेको भए पनि २०२१ साल मंसिर १५ गते मन्त्रि परिषद्को निर्णयानुसार त्यस क्षेत्रको २५ रोपनी ३ आना पैसा एकदाम जग्गालाई प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मन्त्रीपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ गते साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागी भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारण भनि फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । २०१७ सालपछि २०४६ साल पुर्व पनि नहरको नाममा सडकको नाममा जग्गा अधिग्रहण भएका छन् सकैको त सम्पूर्ण घरबार नै उठीबासमा परेका थिए के त्यो जग्गा पनि फिर्ता पाउने कि नपाउने ? हवाई मैदानको लागी पनि सरकारले जग्गा प्राप्त गर्यो जस्तो कि दार्चुलाको गोकुले हवाई मैदान, धनगढी तथा नेपालगंजको हवाई मैदानको जग्गा पनि सरकारले प्राप्त गरेको थियो । त्यो जग्गा पनि फिर्ता पाउने तर्फ गई राजनीतिक प्रतिसोधले मेरो जग्गा लिएको हो भनेपछि फिर्ता दिन मिल्छ मिल्दैन ? आज हामीलाई दुःख लागेको के छ भने यसरी भ्रष्टाचार गर्ने माथि किन कारवाही भएन ।
यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले गर्दा सर्वसाधारण जनताको समेत शीर निहुरिएको छ । यसरी काठमाडौ नेपालको राजधानीको मुटुमा नै (जग्गा) जनताको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि यसरी लुटपाट भयो भैरहेको छ भने बाँकी जिल्ला र प्राप्तमा के भैरहेको होला अनुमान गरौ ।
त्यसैगरी विगत दुई वर्षदेखि विवाद र कारवाहीमा रहेको भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगर बजारको उत्तर तर्फको क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गरी भवनहरु निर्माण गर्दा टुलु टुलु हेरी राख्ने र विद्यार्थीहरले आन्दोलन गर्दा हामी तोड्छौं केही समय रोकिदिनुस भनि नेपाल सरकारले युवा विद्यार्थीहरुलाई अनुरोध गर्दा आज ३ महिना पुग्यो तैपनि भूमाफियालाई जोगाउन न्यायालयद्वारा प्रयास गराउन खोजिएको छ । तर न्यायालयले नेपाली जनताको पक्षमा न्याय गर्नेछ भन्ने विश्वासमा जनता अडिक छन्, त्यसैले आज तोड्नबाट विद्यार्थी पनि पछि हटेका छन् ।
← पहिचानको प्रश्न
नेपालीले अन्न र विद्युत आयात गर्नु नैतिक अपराध हो →